1. ဖတ်ဖူးသော ဟာသလေး တစ်ခု ( ဆရာ နားမလည်လို့ပါ ) (2) ကား လောက ဟာသ ~ ITmanHOME
21:15 ဟာသ No comments
1. ဖတ်ဖူးသော ဟာသလေး တစ်ခု ( ဆရာ နားမလည်လို့ပါ ) (2) ကား လောက ဟာသ
ဖတ်ဖူးသော ဟာသလေးတစ်ခု ( ဆရာ နားမလည်လို့ပါ )
အမျိုးသမီးတစ်ဦးမောင်းလာသောကားကို ယာဉ်ထိန်းရဲက ရပ်ခိုင်းလိုက်သည်။
“သတ်မှတ်နှုန်းထက် ပိုမောင်းလို့ ပါခင်ဗျာ”
“ကျွန်မသိပါတယ်။ အခုဟာက ဓာတ်ဆီမကုန်မီ အိမ်ကိုေ၊ရာက်ချင်လို့ ပါ”
လူတစ်ယောက်သည် အိမ်ပြန်ရောက်လာသည့်အခါ ဇနီးသည်အား ပြောပြနေသည်။
“ကိုယ်ဒီနေ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ မော်တော်ကားတာယာလေးလုံးကို နှစ်လုံးဈေးနဲ့ ရလို့ဝယ်လာတယ်ကွ”
“ဘာပြောတယ် ။ ရှင် ရှုးနေလား။ ကျွန်မတို့ မှာ မော်တော်ကးမှမရှိတာ။ တာယာတွေက ဘာလုပ်ဖို့ လဲ။”
“မင်း ဘရာစီယာဝယ်တုန်းက ငါဘာပြောလို့ လဲ”
“ကိုယ်က ဂျင်စတစ်လောက် မချမ်းသာပါဘူး။ ပြီတော့သူ့ လိုရိုလ်ရွိုက်ကား လည်းကိုယ့်မှာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်းကိုတော့ ကိုယ်တကယ် ချစ်မြတ်နိုး တာပါကွာ”
ထို အခါ အမျိုးသမီးဖြစ်သူက ထိုလူ၏လည်ပင်းကို သာယာစွာဖက်လိုက်ပြီး နားနားကပ်ကာ တိုးတိုးကလေး ပြောလိုက်သည်။
“အဲဒီ ဂျင်စတစ်ဆိုတဲ့ လူက ဘယ်မှာနေတာလဲဟင်”
အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် အရှိန်ပြင်စွာ မောင်းနှင်လာသော မော်တော် ယာဉ်တစ်စီးကို ယာဉ်ထိန်းရဲက ရပ်တန့် စေပြီး ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
“နောက်ကနေလိုက်လာပြီ ရပ်ဖို့ သတိပေး အချက်ပြ မီးနဲ့ ဥသြသံကို ခင်ဗျား သတိမထားမိဘူးလား”
“ဒါဆိုရင် ချက်ချင်းဘာဖြစ်လို့ရပ်မပေးတာလဲ”
“ဒီလိုရှိပါတယ်။ အရင်လက ကျွန်တော်မိန်းမဟာ ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ယောက်နဲ့လိုက်ပြေးသွားပါတယ် ။ အခုဟာက အဲဒီ ရဲက ကျွန်တော်မိန်းမကို ပြန်လာပို့ တယ်ထင်လို့ ပါ”